Nrụgide nrụgide na-ewepụ oghere dị larịị na IGBT MF onye na-ekpo ọkụ ọkụ
Itinye induction Nchekasị na-ebelata na-etinyere ma ferrous na-abụghị ferrous alloys na bu n’obi iji wepụ esịtidem ihe mmapụta nrụpụta site na tupu n'ichepụta Filiks dị ka machining, oyi Rolling Rolling na ịgbado ọkụ. Na-enweghị ya, nhazi na - esote nwere ike ibute ọgbaghara na - adịghị anakwere na / ma ọ bụ ihe ahụ nwere ike ịnata nsogbu ọrụ dịka nsogbu nrụgide nrụrụ. Ebughị n'uche ọgwụgwọ a iji mepụta mgbanwe dị ukwuu na ngwongwo ihe ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ, yabụ na-ejikarị oke okpomọkụ.
Enwere ike inye ihe na-emepụta carbon na alloy ụzọ abụọ nke nchekasị nchegbu:
1. Ọgwụgwọ na-emekarị 150-200 Celsius C na-ebelata nrụgide kachasị elu mgbe obi tara mmiri na-enweghị mbenata mbibi (dịka ihe esiri ike, biarin, wdg)
2. Ọgwụgwọ na-emekarị 600-680 Celsius C (dịka mgbe ịgbado ọkụ, ịkpụzi wdg) na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchekasị nrụgide.
Nchegbu na-ewepụ oghere dị larịị nke carbon nchara na ọnụego nke 30 ụkwụ / 9.1 mita kwa nkeji iji belata ịdị ike site na mpụga 2 ”/ 51mm n'akụkụ nke ọ bụla iji kpochapụ nsogbu ọgbụgba na ngwaahịa ngwụcha
Ihe: Carbon nchara ewepụghị oghere (5.7-10.2 "/ 145-259mm n'obosara na 0.07-0.1" /1.8-2.5mm thick)
Ngwunye Ngwá Ọrụ Ngwunye: HLQ 200kW 10-30 kHz nke na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ nke nwere ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nwere asatọ 10 μF capacitors
- Otutu uzo kewara ikpo oku na-ekpo oku nke emeputara ma meputara nke oma maka ngwa a
Usoro Carbon nchara ewepụghị blanks ga-agba ọsọ site na ntinye eriri na ọnụego nke 30 ụkwụ / 9.1 mita kwa nkeji iji iwe iwe ma ọ bụ nchekasị belata carbon steel. N'ime usoro a, carbon carbon ga-ekpo ọkụ ruo 1200 ºF (649 ºC). Nke a ga-ezu iji wepụ ọrụ hardening si 2 ”/ 51mm nke ọ bụla nke obosara.
Ọsọ: Ntughari ngwa ngwa na-ekpo ọkụ carbon dị ka okpomọkụ, nke na-enyere ọnụego 30 kwa nkeji
Arụmọrụ: Ugbo oku ọ bụghị naanị na-azọpụta oge mmepụta, ọ na-echekwa ụgwọ ọrụ ike
–Footprint: Induction na - ewere akara ukwu, wee nwee ike itinye ya n'ọrụ n'ụzọ dị mfe dịka
Ọgwụgwọ a na - emekarịrị 150-200 Celsius C na - ebelata nrụgide mgbe ọ na - esikwu ike na - enweghị mbenata mbibi (dịka ihe esiri ike, biarin, wdg):
- Ọgwụgwọ na-emekarị 600-680 Celsius C (dịka mgbe ịgbado ọkụ, ịkpụzi wdg) na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchekasị nrụgide.
-Onye na-enweghị ferrous alloys bụ nrụgide wepụrụ na ọtụtụ ụdị okpomọkụ metụtara ụdị alloy na ọnọdụ. Alloys nke meworo ka afọ sie ike na-egbochi nrụgide na-ebelata okpomọkụ n'okpuru ọnọdụ ịka nká.
Igwe anaghị agba nchara nke Austenitic na - enwe nchekasị n'okpuru 480 Celsius C ma ọ bụ karịa 900 Celsius C, okpomọkụ dị n'etiti mbenata nkwụsị corrosion na akara mmụta ndị na - adịghị edozi ma ọ bụ obere carbon. Ọgwụ karịrị 900 Celsius C na-abụkarị ngwọta azịza zuru ezu.
Mmezi Ihe etinyere ụfọdụ, mana ọ bụghị ihe niile, igwe injinịa, ịhazi ihe nwere ike ime ka ihe dị nro, sie ike ma ọ bụ nrụgide, dabere na ọnọdụ mbụ ya. Ebumnuche nke ọgwụgwọ ahụ bụ igbochi nsonaazụ nke usoro ndị gara aga, dị ka nkedo, ịkpụzi ma ọ bụ ịtụgharị, site na imezigharị ihe ndị na-abụghị nke edo edo n'ime nke na-akwalite arụmọrụ / formability ma ọ bụ, n'ụdị ngwaahịa ụfọdụ, na-ezute ihe ngwongwo ikpeazụ.
Ebumnuche bụ isi bụ idozi nchara ka ọ bụrụ na, mgbe ọ gachara, otu ihe mejupụtara na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ siri ike (dịka inye aka kwụsie ike). Idozi mejupụtara kpo oku nke kwesiri ekwesi na okpomoku dika nke di na 830-950 Celsius C (na ma obu karie onu ogugu nke ihe ndi ozo, ma obu karia ihe ngbanye nke oku) ma ghazie ikuku. A na-emekarị ikpo ọkụ na ikuku, ya mere, achọrọ akụrụngwa na-esote ma ọ bụ mmecha ihu iji wepu ọkwa ma ọ bụ akwa akwa.
Igwe na-eme ka ikuku sie ike (dịka ụfọdụ igwe eji arụ ọrụ ụgbọ ala) na-abụkarị "iwe iwe" (nke a na-atụghị anya ya) mgbe ị mechara ka ọ dị nro na / ma ọ bụ na-akwalite arụmọrụ. Ọtụtụ nkọwapụta ụgbọ elu na-akpọkwa maka ọgwụgwọ a. Ngwongwo ndi anaghi edozi anya bu nke gha eme ka obi sie ike (dika otutu ihe eji eme ihe), ma obu ndi na eriteghi uru obula ma obu meputa ihe ndi kwesiri ekwesighi ma obu ihe ndi ozo (dika igwe anaghị edozi).
Categories Technologies Tags carbon steel nchegbu na-ebelata, Itinye n'ọkwa okpomọkụ nrụgide na-ebelata, itinye n'ọkwa kpo oku nrụgide na-ebelata, nsogbu nrụpụta na-enyelata, induction nchegbu na-ebelata okpomọkụ, nrụgide na-ebelata, nrụgide na-ewepụ oghere dị larịị, usoro ịkwụsị nrụgide Mail igodo